Waxaan hadda gelin karnaa sawirada Google Docs iyo Slides | Wararka IPhone
Qoraalka xafiiska Google, oo horay loogu yaqaanay Google Docs, ayaa hadda helay cusboonaysiin cusub oo ay si aad ah u filayaan dadka isticmaala, taas oo ay horeba ugu jirtay waxaan ku dari karnaa sawirada dukumiintiyada in aan ku abuurno adeegga ay Google noogu soo bandhigto bilaash. Muuqaalkan cusub waxaa kaliya lagu heli karaa Google Docs iyo Google Slides. Google si aan macquul aheyn kuma soo darin astaantan arjiga Google Sheets, taas oo aan ku qasbeyn doonin isticmaalka Google Docs haddii aan u baahanahay inaan ku darno wax sawir ah xaashiyaha.
Bandhigyada Google, waxay heshay shaqooyin dheeri ah marka laga reebo kan aan kor ku soo faalloonay taasna waxay noo oggolaanaysaa inaan ku darno sawirro (si toos ah riyadeena) bandhigyada. Thanks to cusbooneysiintan cusub, sidoo kale waan awoodnaa tafatir sawirada aan ka soo kordhinay Ipad-keena iyo sawirro horeyba ugu jiray soo bandhigidda oo aan tafatirnayno. Google waxay sidoo kale ku dartay shaqada gelinta miisaska ilaalinaya qaabka.
Tan iyo markii ay u muuqatay suuqa Qoraalka xafiiska Google waa mid daciif ah maadaama ay si dhib yar noo oggolaaneyso inaan qaabeyno waxyaabaha ku jira in aan ku abuurno codsiyo. Waxaa laga yaabaa in shaqooyinkan cusub ee Google hadda soo kordhiyey ay ahayd inay la yimaadaan nuqulkii ugu horreeyay ee Google Docs si dadka isticmaala marwalba ay ula xisaabtamaan markay abuurayaan ama wax ka beddelayaan dukumiintiyada ku yaal Google Drive. Isticmaalayaasha u baahan tifaftiraha dukumiintiga ee xoogga leh, sida Microsoft Word ama Apple Pages, Google Docs, Google Sheets iyo Google Slides waxay shaqadooda si buuxda u qabtaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aan dooneyno inaan sii qoondeeyno dukumiintiyadayada, xafiiska Google ee xafiiska ayaa gaabinaya iyadoo aan loo eegin meesha aad ka eegto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » Waxaan hadda gelin karnaa sawirada Google Docs iyo Slides